Wararka Maanta: Axad, Dec 16, 2012-Bam-gacmeed xalay lagu weeraray saldhigga dhexe Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose
Sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan xaafadda Calanleey oo ah halka uu weerarka ka dhacay, xalay fiidkii ayay kooxo hubeysan weerar bambaano loo adeegsaday ku qaadeen saldhigga magaalada Kismaayo, waxaana ciidamadii goobta ku sugnaa ay rideen rasaas fara badan.
Banbaanooyinka saldhigga lagu weeraray ayaa ku dhacay afaafka hore ee xarunta, waxaana la sheegay in aysan jirin wax khasaarooyin ah oo ay geeysteen.
Saraakiil katirsan ciidamada dowladda oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa shabakadda HOL u sheegay in aysan jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi, waxayna sheegeen in uu ahaa weerar fuleynimo ah, islamarkaasina ay wadaan baaritanno lagu ogaanayo kooxihii ka danbeeyay.
Ilaa imika lama garanayo ciddi ka danbeeysay weerarkaasi mana jirto cid sheegatay masuuliyadiisa.
Dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa Raaskaambooni ayaa weerarka kadib magaalada kusoo rogay bandow, waxayna howlgallo ballaaran ka sameeyeen qeybo katirsan xaafadaha ku dhow dhow saldhigga, walow aysan jirin cid howlgalladaasi lagu qabtay.